Bariga London iyo Festfaalka Jaaliyadaha oo furmaya – Kasmo Newspaper
Bariga London iyo Festfaalka Jaaliyadaha oo furmaya
Updated - May 11, 2016 12:15 pm GMT
Jaamacadda Queen Mary ee London (QMUL) ayaa qabanaysa feesto laba toddobaad soconaysa; kaa oo ah dabaaldeg iyo in isku keenid jaaliyaddaha ku nool Bariga, iyadoo feestada lagu soo bandhigayo xafladdo isku xig-xiga.
Furitaanka Feestadan Jaaliyaddaha, waxaa la qaban doonaa maalinta Sabtida 21ka bisha Maajo. Waxaa lagu qaban doonaa Stepney Green Park. Waa xaflad loogu talagalay qoysaska oo waa maalin qoysaska loo sameyn doono maaweelis ay ku ciyaaraan.
Maalinta xafladda la furayo kuwa yimaada waxay fursad u heli doonaan inay arkaan xaywaanka xamaaratada ah ee noolaan jiray waayadii hore [tyrannosaurus rex skull] oo khabiirrada xaywaanka wax ka yaqaana wax ka weyddiin karaan, iyo [Lego] dib u abuurayaan iyo waxay fuulayaan baaskiil oo wareega badeelaha cabbitaanka [smoothie] lagu sameynayo.
Dhammaadka bisha Maajo iyo horraanta bisha Juun ciyaaro ayaa sidoo kale la qaban doonaa oo ay ku jiraan socdaal raadraaca nolosha dadka soo galootiga ah ee Whitechapel, dooda taariikhda Olombiga ee East Londay, waxaa sidoo kale la istusi doonaa filin iyo muusig ee 16ka iyo 17ka Century ballads.
Feestada waxay dhammaan doontaa maalinta Sabtiga,4ta bisha Juun, waxayna lagu soo af-jari doonaa QMUL’s Mile End kambaska iyadoo la istusayo cilmi baaristii ugu wanaagsanayd ee ay jaamacaddu samaysay oo ay ku jiraan farshaxan dooli qaaban oo aan timo la’hayn, siminaar aqoon saynis oo ay qabanayaan kooxda joogta Xarunta Unugga iyo siray ee karnafaalka shucuurta luntay.
Sarah Gifford, Sarkaalka ka Qaybgelinta Jaaliyadda ee QMUL [Community Engagement Officer at QMUL,] waxay tiri: “Aad ayaan runtii ugu faraxsan Feestadii Jaaliyadda ee ugu horeysay ciyaaraha iyo dhacdooyinka socon doona laba toddobaad. Xaqiiqdii qofkasta wuxuu ka heli doonaa wax uu kaga qaybqaadan karo oo waxaa jiri doonaa waxyaabo dhowr ah ee qofka ka heli doono waxaan ku rajo waynnahay in qofkasta uu heli doono fursad ay waxbadan ka ogaadaan jaamacadda iyo jaaliyadda xaafaddahooda oo ku dhiirigelisa in danahooda ay horey u sii wataan.”
Feestooyinka jaaliyadda waxay ahmiyaddu ay saari doonaan “nolosha” inta laba toddobaad ayaa sii soconnaysa waxay sahminnayaan dulucda waxbarashada joogtada hh iyo jaaliyadda wadajir ah.
Feestada waxaa wada iyadoo la la kaashanayo Guddiga Tower Hamlets Council, Xarunta Stifford Centre, Social Action for Health, the Salvation Army, Tephney Foundation, Tower Homlets Homes iyo Mashruuca Mile End Community Project. Feestada ayaa sidoo kale gacan ka geystay Canary Wharf Group Plc.
Faahfaahin dheeraad ah oo feestada ku saabsan booqo http://www.qmul.ac.uk/festival/.